Chelsea Oo Kula Tartameysaa Manchester United, Iyo Liverpool Tartanka Jadon Sancho'
HomeWararka Ciyaaraha MaantaChelsea oo kula tartameysaa Manchester United, iyo Liverpool tartanka Jadon Sancho’
Chelsea oo kula tartameysaa Manchester United, iyo Liverpool tartanka Jadon Sancho’
May 4, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay muujisay xiisaha ay u qabto saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho xagaagan.
21 jirkaan ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Manchester United sanadkii la soo dhaafay, laakiin ugu dambeyntii wuxuu sii joogay Jarmalka ka dib markii kooxaha waa weyn ee Premier League ay diideen inay la kulmaan qiimaha lagu doonayay.
Si kastaba ha noqotee, wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in qiimaha Sancho la dhimay ka hor inta uusan furmin suuqa kala iibsiga xagaagan, agaasimaha isboortiga Dortmund Michael Zorc ayaa u muuqday inuu xaqiijinayo inay heystaan ​​heshiis muujinaya inuu Sancho ka tago kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Man United ayaa la fahamsan yahay inay sii wadeyso xiisaha ay u qabto ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England, halka Liverpool ay sidoo kale lala xiriirinayo , BILD ayaa ku warameysa in Chelsea ay sidoo kale ku soo biirtay tartanka.
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa loo maleynayaa inuu duulaan ku yahay kooxdiisii ​​hore, inkastoo uu ka tagay Dortmund wax yar ka hor imaatinka Sancho ee Westfalenstadion.
Maamulka Chelsea ayaa la filayaa inay dib u soo celiyaan suuqa kala iibsiga xagaagan.
Blues ayaa sidoo kale lala xiriirinayay inay u dhaqaaqeyso xiddigo ay ka mid yihiin Erling Braut Haaland iyo Romelu Lukaku .